Tsy Milamina ny Fiainana: Hiadana Isika Rehefa Tonga Ilay Fanjakana
HILAMINA AMIN’IZAY NY FIAINANA
Tsy ho ela dia hitondra ny tany ny Fanjakan’Andriamanitra, ka hiadana sy hilamina ny olona rehetra. Milaza ny Salamo 72:7 hoe: “Ho be ny fiadanana.” Fa rahoviana no ho tonga ilay Fanjakana? Inona no hitranga rehefa hanomboka hitondra ny tany izy io? Ary inona no tokony hataonao raha te ho anisan’ny vahoakan’izy io ianao?
RAHOVIANA NO HO TONGA NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA?
Efa nilaza mialoha ny Baiboly hoe inona no “famantarana” fa kely sisa dia ho tonga ny Fanjakan’Andriamanitra. Nilaza, ohatra, izy io hoe hisy ady, mosary, areti-mandringana, ary horohoron-tany. Hitombo koa ny olona mandika lalàna.—Matio 24:3, 7, 12; Lioka 21:11; Apokalypsy 6:2-8.
Miresaka famantarana hafa koa ny 2 Timoty 3:1-4. Izao no voalaza ao: “Amin’ny andro farany, dia hisy fotoan-tsarotra tsy mora setraina. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ... tsy hankatò ray aman-dreny, tsy hisaotra, tsy ho mena-mivadika, tsy ho tia ny mpianakaviny, tsy ho azo ifanarahana, ho mpanendrikendrika, tsy hahafehy tena, ho masiaka be, tsy ho tia ny tsara, ... ho mpieboebo, ho tia fahafinaretana fa tsy ho tia an’Andriamanitra.” Efa nisy olona nanana an’ireo toetra ireo hatramin’izay. Ny ankamaroan’ny olona mihitsy anefa izao no manana an’ireo toetra ireo.
Tanteraka ireo faminaniana ireo nanomboka tamin’ny 1914. Miaiky ny mpahay tantara sy ny mpitondra ary ny mpanoratra hoe niova be ny fiainana taorian’io taona io. Nanoratra toy izao, ohatra, ilay mpahay tantara danoà atao hoe Peter Munch: ‘Tena nanova ny tantaran’ny olombelona ilay ady tamin’ny 1914. Lasa feno loza ny tany, nihorohoro sy nifankahala ny olona, ary tsy nisy intsony ny filaminana na taiza na taiza. Efa nisy fandrosoana be anefa talohan’io.’
Nilaza koa i Jesosy hoe hisy zavatra tsara hitranga alohan’ny hahatongavan’ilay Fanjakana. Hoy izy: “Hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity, ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra, vao ho tonga ny farany.”—Matio 24:14.
Io vaovao tsara io no tena torin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Izao mihitsy aza no lohatenin’ny gazety iray avoakan’izy ireo: Ny Tilikambo Fiambenana Manambara ny Fanjakan’i Jehovah. Avoaka amin’ny fiteny 338 mahery izy io, ary miresaka ny zavatra tsara hataon’ny Fanjakan’Andriamanitra ho an’ny tany sy ny olombelona.
INONA NO HITRANGA REHEFA HANOMBOKA HITONDRA NY TANY IZY IO?
Ireto misy zavatra efatra hitranga:
Tsy hampiasa an’ireo mpitondra olombelona na hiara-miasa amin’izy ireo io Fanjakana io.
Tsy hahafoy ny toerany ireo mpitondra eto an-tany, ka hiady amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Hadalana anefa izany.—Salamo 2:2-9.
Handringana an’ireny fitondrana ireny ny Fanjakan’Andriamanitra mandritra an’io ady io. (Daniela 2:44; Apokalypsy 19:17-21) Io ilay antsoina hoe ady Hara-magedona.—Apokalypsy 16:14, 16.
Tsy ho ringana izay rehetra manohana an’ilay Fanjakana. Hiaina ao amin’ny tontolo vaovao izy ireo aorian’ilay ady. Hisy an-tapitrisany izy ireo ary antsoin’ny Baiboly hoe “vahoaka be.”—Apokalypsy 7:9, 10, 13, 14.
INONA NO HATAON’ILAY FANJAKANA REHEFA HITONDRA NY TANY IZY IO?
Hita tamin’ny zavatra nataon’i Jesosy teto an-tany hoe inona no hataony rehefa hitondra izy. Nanasitrana ny marary sy ny kilemaina, ohatra, izy. (Matio 4:23) Nanome sakafo olona an’arivony koa izy. (Marka 6:35-44) Nampitony tafio-drivotra mihitsy aza izy.—Marka 4:37-41.
Nampianatra ny olona hihavana sy hiray saina i Jesosy. Raha mampihatra an’izay nampianariny ny olona iray, dia hanana toetra tsara. Tena ilain’ilay olona ireny toetra ireny rehefa lasa anisan’ny vahoakan’ilay Fanjakana izy. Tena miavaka ny fampianaran’i Jesosy. Hita ao amin’ny Matio toko faha-5-7, ohatra, ilay toriteniny teo an-tendrombohitra. Tena lalina ny zavatra ampianariny ao. Tsotra anefa ny teny nampiasainy, ka tena manohina ny fo. Maninona raha mba mamaky azy io?
Natoron’i Jesosy hoe inona no zavatra voalohany tokony hataonao, raha te ho anisan’ny vahoakan’ilay Fanjakana ianao. Hoy izy: “Mba hahazoan’izy ireo fiainana mandrakizay, dia ilainy ny mianatra hahalala anao, ilay hany tena Andriamanitra, sy Jesosy Kristy, ilay nirahinao.”—Jaona 17:3.
Mandray soa be dia be ny olona iray rehefa mahafantatra an’i Jehovah Andriamanitra. Hijery roa amin’izany isika. Voalohany: Lasa mino an’Andriamanitra ilay olona. Tsy hoe minomino fotsiny anefa izy fa tena manana porofo. Resy lahatra àry izy hoe tena misy ny Fanjakan’Andriamanitra, ary kely sisa izy io dia ho tonga. (Hebreo 11:1) Faharoa: Lasa tia an’Andriamanitra izy ka mankatò azy. Tiany koa ny mpiara-belona aminy, ka ampihariny ity tenin’i Jesosy ity: “Izay tianareo hataon’ny olona aminareo no ataovy aminy koa.”—Lioka 6:31.
Hoatran’ny ray be fitiavana ilay Mpamorona antsika, ka tena tiany ho sambatra isika. Tiany hahazo ny “tena fiainana” isika. (1 Timoty 6:19) Mbola tsy izany aloha no iainantsika amin’izao. Olona an-tapitrisany mantsy no mijaly sady miady mafy amin’ny fiainana. Hanao ahoana àry ilay “tena fiainana”? Hijery zavatra sasany hataon’ilay Fanjakana ho an’ny vahoakany isika.
HOATRAN’NY AHOANA ILAY TENA FIAINANA?
“Amin’ny andro [anjakan’i Kristy], dia hiroborobo ny olo-marina, ary ho be ny fiadanana ... Hisy olom-peheziny ... hatrany amin’ny faran’ny tany.”—Salamo 72:7, 8, 13, 14.
“Mampitsahatra ady hatrany amin’ny faran’ny tany [Andriamanitra]. Tapatapahiny ny tsipìka, ary potipotehiny ny lefona.”—Salamo 46:9.
“Eo amin’ny olombelona ny tranolain’Andriamanitra ... Hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana.”—Apokalypsy 21:3, 4.
Hilamina ny fiainana ary ho be dia be ny sakafo, rehefa hitondra ny tany ny Fanjakan’Andriamanitra
LASA TIA FIHAVANANA SY MIRAY SAINA IREO MAMPIHATRA NY FAMPIANARAN’I JESOSY. HO LASA VAHOAKAN’ILAY FANJAKANA IZY IREO